भारतमा स्पेक्ट्रम अक्शन, कुन टेलिकम अपरेटरले कति खर्च गरे ? - Technology Khabar
» भारतमा स्पेक्ट्रम अक्शन, कुन टेलिकम अपरेटरले कति खर्च गरे ?
छिमेकी मुलुक भारतमा स्पेक्ट्रम अक्शन भर्खरै सकिएको छ। यसमा जम्मा ७ खर्ब ७८ अर्ब १४ करोड ८० लाख भारतीय रुपैयाँ बराबरको स्पेक्ट्रम खरिद बिक्री भएको छ।
भारतीय सरकारले ७०० मेगाहर्ज, ८०० मेगाहर्ज, ९०० मेगाहर्ज, १८०० मेगाहर्ज, २१०० मेगाहर्ज, २३०० मेगाहर्ज र २५०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डमा स्पेक्ट्रम लिलामी गरेको हो। जसमा ३३०० मेगाहर्जदेखि ३६०० मेगाहर्जसम्म रहेका छन् जसलाई ५जी एयरब्याण्डको रुपमा लिइएको छ।
यस क्रममा सबैभन्दा बढी स्पेक्ट्रम रिलायन्स जियोले किनेको थियो। यसका लागि उसले ५ खर्ब ७१ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बोली लगाएको थियो।
रिलायन्स जियोको ५ खर्ब ७१ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ
अहिले खर्च गरेको ५ खर्ब ७१ अर्ब २३ करोड रुपैयाँले आफ्नो फोरजी नेटवर्क तथा सेवा अझ बलियो हुने र फाइभजीलाई समेत मदत पुग्ने जियोको भनाइ छ।
एअरटेलको लगानी १ खर्ब ८६ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ
एअरटेलले १ खर्ब ८६ अर्ब ९९ करोडमा किनेको स्पेक्ट्रमले भविष्यमा सुरु हुने फाइभजी सेवामा काम आउने कम्पनीले जनाएको छ। यसबाट उसको नेटवर्कमा अतिरिक्त ९ करोड व्यक्तिहरु जोडिने अपेक्षा छ।
भोडाफोन आइडियाले ५ सर्कलमा किन्यो एअरवेब्स
भोडाफोन आइडियाले स्पेक्ट्रम लिलामीका क्रममा आफ्नो फोरजी क्षमता विस्तारका लागि ५ सर्कलमा एअरवेब्स खरिद गरेको छ। यसबाट उसले प्रदान गर्ने डिजिटल एक्सपेरियन्स अझ राम्रो हुने र आफ्नो कभरेज र क्षमता दुवै बढ्ने कम्पनीको अपेक्षा छ।
स्पेक्ट्रम लिलामीका क्रममा टेलिकमका शेयरमा उछाल
स्पेक्ट्रम लिलामीको भोलिपल्ट एअरटेल भोडाफोन तथा रिलायन्सको शेयरमा उछाल देखिएको छ। यीमध्ये एअरटेलको शेयरमा ०.६, भोडाफोनकोमा o.५ तथा रिलायन्सको शेयरमा ०.७ प्रतिशतको बढोत्तरी भएको थियो।
स्पेक्ट्रमको म्याद २० वर्ष हुने
यो अक्शनमा बिक्री भएको स्पेक्ट्रमको म्याद २० वर्षको हुनेछ। प्राइभेट टेलिकम कमपनीहरु रिलायन्स जियो, भारती एअरटेल तथा भोडाफोन आइडियाले अक्शनमा क्रमश: १ खर्ब, ३० अर्ब तथा ४ अर्ब ७५ करोड गरी जम्मा १ खर्ब ३४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको अर्नेष्ट मनि डिपोजिट बुझाएका छन्।